Booliska Indonesia oo toogtay Afar ruux oo weerartay Saldhig Boolis - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Booliska Indonesia oo toogtay Afar ruux oo weerartay Saldhig Boolis
May 16, 2018 at 09:54 Booliska Indonesia oo toogtay Afar ruux oo weerartay Saldhig Boolis2018-05-16T09:54:14+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Booliska Jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia ayaa xaqiijiyay in ay dileen afar ka mid ah shan Nin oo weerar ku qaaday Saldhiga ugu wayn Booliska ee Jasiiradda.
Afhayeenka Booliska dalkaasi ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay dableyda inay gudaha u galeen Saldhig Boolis, ka hor inta aysan toogan ciidamada ammaanka.
“Gaari ay wateen shanta Nin ayaa galay Saldhigga, waxaana ay Boolisku billaabeen toogashada, waxaa halkaas ku dhintay afar ka mid ah shan Nin oo weerar ku qaadday Saldhigga.” ayuu yiri Setyo Wasisto oo ah Afhayeenka Booliska Sumatra.
Sarkaal ka mid ah Booliska ayaa dhintay kaddib markii Ninka 5-aad oo gaari ku baxsanaya uu gaariga ku dhuftay,waxaa kale oo dhaawacmay Wariye isaguna goobta war u tagay,waxaana jiiray Gaariga Ninka baxsadka ah.
Weerarka saaka oo Arboco ah ka dhacay Jasiiradda Sumatra waxaa uu yimid kaddib markii todobaadkan laba weerar lagu qaaday Kaniisado iyo Saldhig Boolis oo ku yaalla Magaalada 2aad ee ugu Weyn Indonesia ee Surabaya.
Dowladda Indonesia ayaa sheegtay in labadii weerar ee ka dhacay Magaalada Surabaya ay ku dhinteen 24 Qof,weerarradaas waxaa fuliyay Labo Qoys,qoyska 1aad o ka boobnaa Hooyo,Labo Gabdhood ayaa weeraray Kaniisad,Labo wiil oo isla qoyskaas ah ayaa weeraray kaniisad kale halka aabbaha reerka uu isku qarxiyay kaniisadda saddexaad daqiiqado gudahood
« Third-World America: Somali Gang Shoots Up Wedding Party In New Hampshire
Warbixin: Maxay Aheyd Natiijada 8 Safar Uu Farmaajo Ku Tagay Khaliijka?! »